"COVID-19 Haitapurirwe Nekupihwa Ropa Muchipatara”-NBSZ - HealthTimes
Hakuna mukana wekuti utachiona uhwu hungawanikwe muropa raungagamuchire kubva kuNBSZ”
MUSABATIRE hana mumaoko muchizeza kuti zvino shuramatongo yatekeshera pasi rese yeCoronavirus yemhando yeCOVID-19, haiwanikwe yakahwanda muropa rinopiwa varwere vanoda ropa here? Iyi inhau iri pamiromo pevanhu vazhinji. Woti dambudziko rekuda kuwedzerwa ropa nekuda kwenjodzi, kana icho chakupa ronda chati nhunzi dzikudye here, wanikwe ropa racho rinendereka, zvinozofamba sei?
Aiwa, zorodzai henyu pfungwa, izvi hazviitike, sangano guru rehomwe yeropa, iro rinoferefeta ropa zvakare, reNational Blood Services Zimbabwe (NBSZ) rakazivisa.
COVID-19 yakasiyana neutachiona hweHIV. HIV inorarama uye inogara nekukura muropa uye muchinhu chipenyu. C-19 inotapurirwa kubva mumhepo pamunhu anahwo kana achinge akosora kana kuti hwadonhera pamudziyo, hwanotaukurwa muchadenga, HIV haitakurwe muchadenga. C-19 naizvozvo pachirungu vanoti respiratory infection kureva kuti chirwere chinotapukira negosorwa chichifamba munzira yekufema nayo.
“COVID-19 haigare muropa, nyangwe dai yaigara kupepetwa, kuurutsva nekuongororwa kweropa hakuna chakunosiya, yaitoraurwa yonzi kwakadaro puuu. Munoziva kuti HIV iri mumhuri yeutachiona, (virus) asi parizvino dambudziko rekuwana utachiona uhu muropa hakuchina zvachose. Ropa rave kuchenurwa kuburikidza neongororo, hapana chinopfuura chakaipa chingavhiringidze utano vabva muropa rinopiwa vanoda ropa,” vakadaro mukuru we sangano re NBSZ, Muzvare Lucy Marowa.
Sezvo C-19 ichirarama mumhepo, haibatike kuti dzviii, muroyi akahwanda mumhepo yatenderera kubva kune anayo, tinoona mutsauko neHIV, inotoda kutakanya pachinhu chipenyu kuti itapukire. Izvi zvinoita kuti HIV ive nyore kudzivirira pane C-19.
Ongororo dzese dzakaitwa nanamuzvina fundo kusvika pari zvino dzinopokana nekuti ropa ringave gapu reutachiona hweC-19. Asio, vana chamangurangura vefundo vanoti vanogara vakavhura ziso rimwe havarare hope dzebenzi, vari kudzidza zuva nezuva nekuti utachiona uhu hutsva, itsuro yakamukira mumakumbo, kuitandanisa ichiri poripocho, iri kumhanya ivo nembwa dzavo vari mushure, wanikwe guruva tugu mudenga,” Chiremba Stanley Midzi vebazi reWorld Health Organisation (WHO) vakatsinhira.
Sangano reNBSZ rinokurudzira kuti vanhu vatano, vakagwinya, vanotemwa dzinobva ropa vape ropa. Ndonda hadzikurudzirwe kukamura pashoma padzimire napo.
Sezvinei ukange waita C19, unokurudzirwa kuti usape ropa. Kune vabva kure, vakambogara muquarantine, munokurudzirwa kusapa ropa.
“Tiri kukoka vose vanopa ropa kuti vauye uye tinochengetedza zvese zvinokurudzirwa mukupa ropa.
Nenhau yemukondombera weC-19, anopa ropa anotarisirwa kunge asina kubva kunzvimbo dzapisa utachiona uhwu
Kuve chigwindiri chacho, mutemwa nyora dzinobva ropa
Kuve munhu asina ndereka, woti wapa ropa iwe usina kutaura kuti unorwarao kare nechirwere cheshuga kana asima hazvitarisirwe kudaro
Kupa ropa hakuna kubhadhara, musazotarisira mari,” mukuru weNBSZ Lucy Marowa vakazivisa.
Munguva ino inonetsa kufamba, vanoda kupa ropa vanokurudzirwa kuchaya runhare kusangano iri vopiwa nguva nezuva rekuuya.
Chii Chinoita kuti ropa ribhadariswe iro richipihwa pachena?
Nhau yekutengeswa kweropa inhau inoshungurudza varwere, veruzhinji vanoti sei richitengeswa asi isu tine zvitsuvi zvinobva ropa tichipa pachena.
Mukuru wezvemari mu NBSZ, VaRadhi Chikwereti vakatsanangura kuti sei ropa riine muripo.
“Ropa haritengeswi, mari yamunoti muripo inzira yekuti tsime redu risapwe. Kune mari zhinji inoshandiswa mukutorwa, kuvhenekwa uye kuchengetedzwa kweropa. Dai raitengeswa, haraitangika.
“Sangano redu rinonzi pachirungu service, kureva kuti rubatsiro, sehomwe yerubatsiro, tinofanira kuti tapa ropa rakachenurwa tikwanise kuchenura rimwe rinouya mangwana.”
VaChikwereti vakaratidza kuti sangano harina chikwereti asi kuti vane rudo kuti upenyu huenderere mberi kuburikudza nekuwana ropa rakachena semukaka.
Sezvo nhava yehomwe yeropa isiri kuwana ropa kubva kuvana vezvikoro vanove chitubu chavo chisingapwe, vanokukokayi kuti muvabate muwedzere hari iyi yave kuita zvekukwengura.
#COVID19, BREAKING NEWS, Health News, HealthTimes VernacularCOVID-19, ropa